२०७६ को सार्वजनिक बिदा राजपत्रमा प्रकाशित : कुन दिन कुन बिदा [सूचीसहित] « Janaboli
२०७६ को सार्वजनिक बिदा राजपत्रमा प्रकाशित : कुन दिन कुन बिदा [सूचीसहित]
काठमाडौं । अहिले नेपालमा आवश्यक्ता भन्दा धेरै सार्वजनिक विदा भएको ब्याख्या भइरहँदा सरकारले ठुलो पविर्तन गर्ने भएको छ । सरकारले ठुलो पविर्तनका साथ २०७६ सालका सार्वजनिक बिदा हुने दिनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बिदा सार्वजनिक गरेको हो ।
पर्व, महिला कर्मचारीका लागि मात्र बिदा, शिक्षण संस्थाका लागि मात्र बिदा, जात्रा बिदा, दसैं बिदा, तिहार बिदा, दिवस बिदा, दिवस जयन्ती बिदा र सट्टा बिदा भनेर विभिन्न शीर्षकमा बिदा दिइएको छ । पर्व बिदाअन्तर्गत नव वर्ष वैसाख १, शिवरात्री फागुन ९ र फागु पूर्णिमा पहाडी तथा भित्री मधेशका ५८ जिल्लामा फागुन २६ र अन्य जिल्लामा फागुन २७ गते बिदा दिइने गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका आधारमा पनि विभिन्न पर्वमा बिदा दिइने जनाइएको छ । किराँत र राई याख्था, सुनुवार, लिम्बू जातिका उभौली पर्व जेठ ४, गौरा पर्व भदौ ६, इद पर्वका अवसरमा समेत सरकारले बिदा दिने भएको छ । छठ पर्व, इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व बकर इद (इदुल जोहा), किराँत जातिको उधौली पर्व, यमरी पुन्ही, ज्यापू दिवस मङ्सिर २६, इसाई धर्मावलम्बीहरुको क्रिसमस डे पुस ९, तमु ल्होसार पुस १५, माघे सक्राङ्न्ति माघ १, सोनाम ल्होसार माघ ११, ग्याल्पो ल्होसार फागुन १२ मा दिने भएको छ ।
यस्तै, सिरुवा पावनी पर्व झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा र सप्तरीमा मात्रै दिइने भएको छ । धवाथाम्बु छेउचिक पर्वका दिन त्यस्तो पर्व मनाउने जिल्लामा सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । महिला कर्मचारीका लागि भदौ १६ गते हरितालिका तीज र असोज ५ गते जितिया पर्व मनाउने जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिइएको सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी शिक्षण संस्थाका लागि बसन्तपञ्चमी माघ १६ गतेका दिन बिदा हुनेछ ।
जात्रा काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्र चार जात्रामा सार्वजनिक बिदा दिइनेछ । गाइजात्रा साउन ३१, इन्द्रजात्रा भदौ २७, मछिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा (सो जात्रा देखाउने दिन) र घोडे जात्रा चैत ११ गते सार्वजनिक बिदा हुने भएको हो । यस्तै सरकारले दशैं बिदा पाँच दिन दिने जानकारी दिएको छ ।
फूलपातीदेखि एकादशीसम्म (असोज १८ देखि २२)सम्म दशैं बिदा हुने जानकारी दिइएको छ । लक्ष्मीपूजादेखि भाइटीकासम्म तीन दिन तिहारको बिदा हुने भएको छ । यसैगरी दिवस बिदाअन्तर्गत विश्व मजदुर दिवस (वैशाख १८), संविधान दिवस (असोज ३), अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (फागुन २५) र अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस (मङ्सिर १७) अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिइने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जन्मजयन्ती बिदामा बुद्ध जयन्ती (जेठ ४), सम्बन्धित धर्मावलम्बीका लागि गुरुनानक जयन्ती (कात्तिक २६), फाल्गुनन्द जयन्ती (कात्तिक २५) मा बिदा दिइने भएको हो । सरकारले केही दिवसलाई राष्ट्रिय रुपमा मनाएको भए पनि कार्यालय भने खुल्ने जानकारी दिएको छ । यी विदाहरुमा, गणतन्त्र दिवस (जेठ १५), निजमती दिवस (भदौ २२), राष्ट्रिय एकता दिवस (पौष २७), राष्ट्रिय शहीद दिवस (माघ १६), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७), जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत उत्नमूलन राष्ट्रिय दिवस (जेठ २१) रहेका छन् ।
यसैगरी विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सम्बन्धित मुलुकको सार्वजनिक बिदालाई समेत दृष्टिगत गरी बढीमा १८ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा आफैंले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्ने जनाइएको छ । अस्पताल, रोपवे, टेलिफोन, प्रहरी, अध्यागमन, थाना, चौकी, फायर बिग्रेड, टक्सार, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, मुद्रण विभाग, हुलाक आदि जस्ता निरन्तर र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालय विभाग तथा कार्यलयहरूले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कामकाज गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता कार्यालयमा दैनिक काम नरोकिने गरी सार्वजनिक बिदाका दिन काम गरेबापत प्रचलित कानुनको रित पुर्याई सट्टा बिदा बस्न सक्ने जानकारी दिइएको छ ।
वैशाख १ देखि कात्तिक १५ गतेसम्म र माघ १६ देखि चैत मसान्तसम्म कार्यालय समय बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म र कात्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्म बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म तथा शुक्रबार बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने भएका छन् ।
यसरी विदा र कार्यालय समय व्यवस्थापन गर्दा सर्वसाधारण जनताले भोग्दैं आएको समस्याको केही हदसम्म समाधान हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषीलाई तत्काल सजाय हुनुपर्छ : नेता रावल
काठमाडौं । लामो समय देखि विवादीत बयान दिदैं आउँनु भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भीम
पर्वतमा शक्तिशाली बम विस्फोट
काठमाडौं । अचानक बम विस्फोट हुँदा २ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । पर्वतको विहादी
वसन्त ऋतुपछि काठमाडौ निलाम्मे बनाउने यो फूल के हो ?
एजेन्सी । आयुर्वेद र विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरूमा शिरीषको उल्लेख भएको पाइन्छ। संस्कृत र नेपाली साहित्यमा
लुटेरालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले गोली चलायो, स्थित तनावग्रस्त !
काठमाडौं । अपराधि समात्न प्रहरीले गोली चलाएको छ । महानगरिय अपराध महाशाखाले पेशेवर लुटेरालाई पक्राउ